တနျဆောငျမုနျး လပွညျ့နေ့ ၁၃၈၃ခုနှဈ၊ (18.11.2021) ​ကွာသပတေးနေ့ ….. ပံ့သကူပဈပါ! – Nyi Ma Lay
တနျဆောငျမုနျး လပွညျ့နေ့ ၁၃၈၃ခုနှဈ၊ (18.11.2021) ​ကွာသပတေးနေ့ ….. ပံ့သကူပဈပါ!
တနျဆောငျမုနျး လပွညျ့ည ၁၂ နာရီမှာ ပံ့သကူပဈပါ။ ကိုယျပွနျရမယျ့ စီးပှား လာဘျလာဘ ကိုမမြှျောကိုးပဲ စိတျစတေနာ သနျ့ရှငျးစှာ ပံ့သကူပဈပါ။ အစစအရာရာ ကွပျတညျးလာတဲ့ ခတျေမှာ ပံ့သကူပဈပါ ရတဲ့ သူ ပြျောရှငျပါစေ။
ငှပေမာဏ နဲသညျ ဖွဈစေ ၊ မြားသညျဖွဈစေ ပစ်စညျး နဲသညျဖွဈစေ၊ မြားသညျဖွဈစေ ကိုယျ တတျနိုငျသညျ့ ပမာဏလေးကို စတေနာ မြားစှာဖွငျ့ ပံ့သကူပဈပါ။ နောငျဘဝရမညျ့ကုသိုလျ၊ ယခုရမညျ့ ကုသိုလျ အသာထား ကွပျတညျးနကွေတဲ့ အခြိနျမှာ ကိုယျ့ ပံ့သကူလေးကွောငျ့ ရတဲ့သူပြျောသှားရငျ ကိုယျပီတိဖွဈရတာက အခုခကျြခွငျးရတဲ့ အကြိုးကြေးဇူးပါပဲ။
သူခိုးကွီးညမှာ စနောကျပွီး ကြီးမနိုးပှဲလုပျကွသလို။ ပံ့သကူပဈပှဲ အစဉျအလာလေးလဲ ဆကျထိနျးသိမျးကွပါစို့နျော။ ငှေ ၅၀၀ ဖွဈစေ၊ ဆနျအိပျသေးသေးလေးဖွဈစေ ဖနျခှကျလေး တဈခုဖွဈစေ ပံ့သကူပဈပါသညျလို့ စာလေးရေးပွီး ပံ့သကူပဈကွပါနျော။
ပံ့သကူရတဲ့ သူကလညျး မညျသူမညျဝါပေးမှနျးမသိတော့ ဦးဘယျသူက၊ ဒျေါဘယျသူက ငါ့ကို ပေးကမျးထားတာပဲဆိုတဲ့ အကွှေးလို ခံစားရမညျ့အသိ ကြေးဇူးကွှေး ဝနျထုပျဝနျပိုးလညျး မရှိတော့ဘူး။
သူလညျး လှတျလှပျစှာ ပြျောကိုယျလညျး ပုဂ်ဂိုလျစှဲမရှိ ဖွူစငျစှာလှူ ဘယျလောကျ ဖွူစငျ အေးခမျြးလိုကျသလဲ။ ပံ့သကူပဈတဲ့ အခါ ဗုံးလား၊ မသာမာတဲ့ ပစ်စညျးလား ဆိုပွီး မွငျတဲ့သူ စိတျမပူရအောငျ ကိုယျလှူမယျ့ ပစ်စညျးက
၁။ အိတျနဲ့ ထညျ့မှ ရမညျဆိုလြှငျ ကွှပျကွှပျအိတျ အကွညျသုံးပေးပါ။
အထူးအရေးကွီးတာက “ပံ့သကူပဈပါသညျ” ဆိုတဲ့ စာလေး ကပျထားပေးနျော ရတဲ့သူတှေ ဘေးကငျးပွီး သောက ကငျးစှာ ရယူနိုငျကွပါစေ။
တနျဆောငျမုနျးလပွညျ့ညမှာ ပံ့သကူပဈတဲ့ အစဉျအလာလေး ပိုပွီးတှငျကယျြလာအောငျ တဈဖကျတဈလမျးက ပါဝငျကွမယျနျော။ ရယူတဲ့ ပြျောရှငျမှုထကျ ပေးကမျးလို့ရတဲ့ ပြျောရှငျမှုက ပိုအေးခမျြးရတယျ မဟုတျလား။ Crd :
တနျဆောငျမုနျး လပွညျ့နေ့ ၁၃၈၃ခုနှဈ၊ (18.11.2021) ​ကွာသပတေးနေ့
တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်နေ့ ၁၃၈၃ခုနှစ်၊ (18.11.2021) ​ကြာသပတေးနေ့ ….. ပံ့သကူပစ်ပါ!
တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်ည ၁၂ နာရီမှာ ပံ့သကူပစ်ပါ။ ကိုယ်ပြန်ရမယ့် စီးပွား လာဘ်လာဘ ကိုမမျှော်ကိုးပဲ စိတ်စေတနာ သန့်ရှင်းစွာ ပံ့သကူပစ်ပါ။ အစစအရာရာ ကြပ်တည်းလာတဲ့ ခေတ်မှာ ပံ့သကူပစ်ပါ ရတဲ့ သူ ပျော်ရွှင်ပါစေ။
ငွေပမာဏ နဲသည် ဖြစ်စေ ၊ များသည်ဖြစ်စေ ပစ္စည်း နဲသည်ဖြစ်စေ၊ များသည်ဖြစ်စေ ကိုယ် တတ်နိုင်သည့် ပမာဏလေးကို စေတနာ များစွာဖြင့် ပံ့သကူပစ်ပါ။ နောင်ဘဝရမည့်ကုသိုလ်၊ ယခုရမည့် ကုသိုလ် အသာထား ကြပ်တည်းနေကြတဲ့ အချိန်မှာ ကိုယ့် ပံ့သကူလေးကြောင့် ရတဲ့သူပျော်သွားရင် ကိုယ်ပီတိဖြစ်ရတာက အခုချက်ခြင်းရတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးပါပဲ။
သူခိုးကြီးညမှာ စနောက်ပြီး ကျီးမနိုးပွဲလုပ်ကြသလို။ ပံ့သကူပစ်ပွဲ အစဉ်အလာလေးလဲ ဆက်ထိန်းသိမ်းကြပါစို့နော်။ ငွေ ၅၀၀ ဖြစ်စေ၊ ဆန်အိပ်သေးသေးလေးဖြစ်စေ ဖန်ခွက်လေး တစ်ခုဖြစ်စေ ပံ့သကူပစ်ပါသည်လို့ စာလေးရေးပြီး ပံ့သကူပစ်ကြပါနော်။
ပံ့သကူရတဲ့ သူကလည်း မည်သူမည်ဝါပေးမှန်းမသိတော့ ဦးဘယ်သူက၊ ဒေါ်ဘယ်သူက ငါ့ကို ပေးကမ်းထားတာပဲဆိုတဲ့ အကြွေးလို ခံစားရမည့်အသိ ကျေးဇူးကြွေး ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးလည်း မရှိတော့ဘူး။
သူလည်း လွတ်လွပ်စွာ ပျော်ကိုယ်လည်း ပုဂ္ဂိုလ်စွဲမရှိ ဖြူစင်စွာလှူ ဘယ်လောက် ဖြူစင် အေးချမ်းလိုက်သလဲ။ ပံ့သကူပစ်တဲ့ အခါ ဗုံးလား၊ မသာမာတဲ့ ပစ္စည်းလား ဆိုပြီး မြင်တဲ့သူ စိတ်မပူရအောင် ကိုယ်လှူမယ့် ပစ္စည်းက
၁။ အိတ်နဲ့ ထည့်မှ ရမည်ဆိုလျှင် ကြွပ်ကြွပ်အိတ် အကြည်သုံးပေးပါ။
၂။ အိတ်မလိုရင် ဒီအတိုင်းလေး ပစ်ပါနော်
အထူးအရေးကြီးတာက “ပံ့သကူပစ်ပါသည်” ဆိုတဲ့ စာလေး ကပ်ထားပေးနော် ရတဲ့သူတွေ ဘေးကင်းပြီး သောက ကင်းစွာ ရယူနိုင်ကြပါစေ။
တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ညမှာ ပံ့သကူပစ်တဲ့ အစဉ်အလာလေး ပိုပြီးတွင်ကျယ်လာအောင် တစ်ဖက်တစ်လမ်းက ပါဝင်ကြမယ်နော်။ ရယူတဲ့ ပျော်ရွှင်မှုထက် ပေးကမ်းလို့ရတဲ့ ပျော်ရွှင်မှုက ပိုအေးချမ်းရတယ် မဟုတ်လား။ Crd :
တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်နေ့ ၁၃၈၃ခုနှစ်၊ (18.11.2021) ​ကြာသပတေးနေ့
Previous post ကားဘကျထရီ ခေါငျး ဖွုတျမိသော အခါ ဖွဈတတျတဲ့ ပါဝါဝငျးဒိုး ဖှငျ့မရခွငျး ပွသာနာ ကို ကိုယျတိုငျဖွရှေငျးနညျး
Next post အလင်ျကာကြျောစှာ ဆရာ မွို့မငွိမျး၏ ဘဝအကွောငျး ( လူသာသပွေီး နာမညျမသသေူ )